उपचारमा भौँतारिएका ती दस दिन | चितवन पोष्ट
उपचारमा भौँतारिएका ती दस दिन
मानव जीवनमा अनेकन रोगहरुले आक्रमण गर्छन् । त्यसको निदानका लागि हामी अस्पताल धाउँछौ ताकि रोग निको होस् । जो कोही मानिस पनि आफू स्वस्थ रहन चाहन्छ, सबैको चाहना पनि त्यही हो । जीवनमा जो कोही पनि हाँसीखुशी बाँच्न चाहन्छ, रोग नलागोस् भन्ने चाहन्छ । धेरै वर्ष बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । बाँच्नको लागि मानिस जे पनि गर्न तयार हुन्छ । धनाढ्य व्यक्तिहरु आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्छन् । गरिब निमुखाहरुलाई रोग लाग्दा उपायविहीन हुन्छन् । तर पनि सकेसम्म सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको जसरी हुन्छ त्यसरी उपचार गरिरहेकै हुन्छन् । यी र यस्तैमा गाँजिएको छ मानिसको जीवन र बाँच्ने शैलीहरु ।
यी सबै भन्दै गर्दा २०७५ पुस १५ गतेदेखि २७ गतेसम्मको लामो उपचारको केही मन्थन गर्ने चाहना भयो । सधैँजसो मेरो दिनचर्या अनुसार बिहानको खाना खाएर पसलतिर लागेको थिएँ । दिनहुँ गर्ने काम सहजरुपमा गर्दै थिएँ । दिउँसोको खाजा खाने समय भएको थियो । दिउँसो ३ बजे सधैँजसो खाजा खाउँखाउँ हुन्थ्यो । एक्कासि केही पनि खान मन लागेन । शरीर एकाएक असजिलो, खुट्टा लुलो भएजस्तो, हिँड्न पनि गाह्रो भयो, हल्का रिंगटा लागेजस्तो पनि भयो । मलाई लाग्यो म आफू ठीक छैन । त्यसबेला आदरणीय सर योगेश दवाडी साथमै हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई आफूलाई अनुभव भएको सबै बताएँ । उहाँले, तपार्इं तुरुन्त हस्पिटल जानुहोस्, तपाईको प्रेसर बढेको हुनसक्छ, ढिला नगर्नुस्, गई हाल्नुस् भन्नुभयो ।
उहाँले दिनु भएको सल्लाहलगत्तै म सुरुमा मेडिकल गएँ र जँचाए । मेडिकलका पोमलाल पाण्डेजीले तपाईंको प्रेसर स्टेटलाइनमा छ र तपाईंलाई एकदमै आरामको जरुरत छ भन्नुभयो । त्यो बेला मेरो प्रेसर १५०÷१०० रहेको थियो । मेडिकलका पाण्डेजीले नुन कम खानुस्, माछा, मासु, चिल्लो, पिरो, डिं«क्स केही नगर्नुहोला भन्ने सुझाव दिनुभयो, मैले जवाफमा हस् भनेँ । यसरी प्रेसर यतिधेरै भएको मलाई थाहा थिएन । हल्का प्रेसर भएको कहिलेकाहिँ जचाउँदा देखिएको पनि हो । मेडिकलबाट यस्तो कुरा आएपछि मनमा धेरै डर, त्रास उत्पन्न भयो । केही गर्न मन पनि भएन । मेडिकलका पाण्डेले आराम नै गर्ने कुरा गरेकाले अब आराम गर्नुपर्ने अवस्था भयो । तर के गर्नु रातको ड्युटी मेरो (बेलुकी ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म) साह्रै गाह्रो थियो । साँझको करिब ४ः४५ बजेको थियो । मैले अफिसमा म आफू सन्चो नभएको जानकारी गराएँ । अफिसबाट दिलीप सरलाई भन्नुस् न भन्ने कुरो भयो, मलाई आराम धेरै जरुरत भएकोले सर हजुरले नै भन्नुहोला सर म एकदमै अशक्त अवस्थामा छु भनेँ ।
साँझ बढ्दै गएको थियो साथसाथै छाती दुख्न पनि बढ्दै गएको थियो । मनमा अनेकन कुराहरु खेल्न थाल्यो, डर र त्रास उत्तिकै छ । छटपटि पनि उस्तै । के गर्ने, कसो गर्ने, डरमात्रै लागिरहने भइरह्यो । छाती बढी दुख्न थालेपछि घरपरिवारले अस्पताल जाने भन्ने सल्लाह भयो । साँझको ७ः३० मा हामी, ज्वाइँ पूर्णबहादुर तामाङ भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारको लागि पुग्यौं । अस्पतालमा विरामीको भीड उस्तै । सबैको आ–आफ्नै पीडा । मभन्दा बढी छट्पटाइ रहेको मान्छे देखेपछि मलाई भित्र बस्न नसकी एकछिन बाहिर आउन बाध्य भएँ । आफैँ आत्तिएको अवस्था झन् त्यो दृश्यले मन नै थाम्न नसक्ने भएपछि एकछिन बाहिर नै बसेँ । एकछिनमा ज्वाइँ पूर्णजी र परिवारले भित्र जाउँ यहाँ यस्तै हो । देखाइ हालौं भन्दै थिएँ । फेरि बिस्तारै भित्र छिरेँ र मैले आफूलाई भएको सबै बेलिबिस्तार डा. साबलाई लगाएँ । लगत्तै मलाई बेडमा सुत्न भने, म त्यहीअनुसार बेडमा पल्टेँ । मैले किन र सिस्टर भन्दै थिएँ । इसीजी गर्नुप¥यो भने सिस्टरले । आकस्मिक कक्षको बेडमा सुताइयो इसीजी भयो साथै दुई वटा इन्जेक्सन पनि डाको सल्लाहअनुसार मलाई दिइयो । एक, डेढ घण्टा आराम गर्नुहोस् ठीक हुन्छ भने । भनिन्छ कुनै बिरामी अस्पताल पुगेपछि उसको आधा रोग निको हुन्छ, सायद मलाई पनि त्यस्तै भयो भएको थियो त्यतिबेला । डेढ घण्टापछि मलाई डा. साबले सोध्नुभयो, के छ अहिले तपाईको अवस्था, ठीक छ नि, दुख्न कम भएको छ भन्दै थिए, मैले प्रति उत्तरमा भने हजुर डा. साब अहिले कम भएको छ पहिलेभन्दा ।
डा. साब भन्दै थिए, ठीक हुन्छ न आत्तिनुस्, मनमा धेरै कुरा नखेलाउनुस् । आराम गर्नुहोस् यस्तै यस्तै । ४÷५ थरिका ग्याष्ट्रिकका औषधीलगायत निद्रा लाग्ने औषधि डा. साबले पे्रस्किप्सन लेखिदिए र यो औषधि खानु भने । हस्पिटलको झण्डै ४ः३० घण्टाको बसाईंपछि रातको करिब १२ः०० हामी घर पुग्यौं ।
भोलिपल्ट (पुस १६) बिहान ७ः०० बजे उठियो, पीडा उस्तै छ, दुख्न कम छैन । चिन्ताले शरीर गाल्दै लगेको छ । के गर्ने, कसो गर्ने, केही सोच्न सकेको छैन । दिनभरि चिन्ता, छटपटी, छाती दुख्ने यस्तै यस्तै पीडाले दिन गुज्रियो । साँझहुँदै गयो अझ बढी छाती दुख्दै गयो, के गरौँ के गरौँ भइरह्यो । फेरि परिवारसँग हस्पिटल जानुपर्छ जस्तो लाग्यो, साह्रै भएन भने र रातको करिब ८ः४५ बजे हामी परिवार, ज्वाइँ पूर्णबहादुर तामाङ, भाइ उमेश श्रेष्ठ भएर हामी हस्पिटलतर्फ लाग्यौं । उही फेरि भरतपुरको आकस्मिक कक्षमा पुग्यौँ । त्यसबेला राउण्डमा डा. सुनिलकुमार साह थिए, उहाँलाई मैले आफूलाई भएको आफ्नो सबै बताएँ । डा. साहलाई म आत्तिएको देखेर प्रिस्किप्सन औषधि लेख्नुभयो, औषधि खाएर बेडमा गएर आराम गर्न भन्नुभयो । उहाँले भनेझैँ मैले गरेँ, पछि थाहा भयो त्यो त स्लिपिङ ट्याब्लेट पो रहेछ । जबकि स्लिपिङ १ वटा खानुपर्ने हुन्छ तर मेरो अवस्था देखेर डा. साहले दुईवटै एकैपटक खान भने । औषधि खाएर करिब १ घण्टा म बेडमा आराम गरेँ । डा. साहले ब्लड टेष्ट, इसीजी र छातीको एक्सरे गर्न भने । सबै टेष्ट गरिसकेपछि रिपोर्ट सबै राम्रो छ तपाईं ठीक हुनुहुन्छ भने— अब तपाईं घर जानु सक्नुहुन्छ ।
डा. साहले प्रिस्किप्सन फेरि स्लिपिङ ४ वटा ट्याब्लेट लेखेका थिए र भन्दै थिए यो खाएर भएन भने ८ नं कोठामा जानु । मैले प्रश्न गरेँ ८ नं. कोठामा किन डा. साव ? डा. भन्दै थिए तपार्इंको उपचार त्यहाँ हुन्छ साइक्यास्ट्रिकका डा. साब हुनुहुन्छ । जब डाले यी सबै कुरा भन्दै गर्दा मनमा झन् त्रास बढ्दै गयो । एकछिन लाग्यो अब मनोरोगी भएँ । दोस्रो दिनको उपचारपछि हामी घर फिर्ती भयौं रातको २ः०० बजे ।
पुस १८ गते बिहान म आफू ठीक नभएपछि पोखरा बसपार्क रहेको मेडिकलवाला पोमलाल पाण्डे सरकहा“ पुगेँ र उहाँलाई सबै कुराहरु बताएँ । उहाँले ईको गर्नुस् न त एकपटक अनि सबै क्लियर हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो । हुन पनि छाती दुखेको कम भएकै थिएन । उहाँकै सल्लाहबमोजिम भोलिपल्ट जाने निर्णय भयो ।
पुस १९ गते फेरि भरतपुर हस्पिटलतर्फ उपचारको लागि हामी प्रस्थान ग¥यौं । कोठा नं. ४ मा डालाई भेटेर सबै बेलिविस्तार लगाएँ । डा. सावले सबै रिपोर्ट हेरेपछि ईको त छँदै थियो, ब्लड टेष्ट र सिटिस्क्यान पनि गर्न लगाए ।
म डा. लाई सोध्दै थिएँ— सिटिस्क्यान गर्नै पर्छ ? डा. भन्दै थिए, तपाईंको छातीमा के भएको हामीले कसरी हेर्ने त गर्न त प¥यो नि ! डा. सावको फलो गर्नुको विकल्प थिएन । डा. कै सल्लाहअनुसार ब्लड टेष्ट, ईको र सिटिस्क्यानलगायत सबै गरियो । ब्लड टेष्ट र इकोको रिपोर्ट सोही दिन पाइयो तर सिटिस्क्यानको रिपोर्ट भोलिपल्ट १२ बजेपछि आउन त्यहाँका सिस्टरले भने ।
सिटिस्क्यान सकेपछि मैले सोधेँ, ‘समस्या के छ मेरो छातीको ?’
छातीमा थोरै दाग देखिएको छ भने सिटिस्क्यानवालाले । त्यो दिन यस्तै भयो सबै रिपोर्ट डा. लाई देखाउन पाइएन । समय पनि २ः०० बजेसम्म मात्र डा.लाई देखाउने, त्यो दिन ३ः०० बजिसकेको थियो । अब हामी घर जानुबाहेक अरु कुनै विकल्प थिएन । यसरी फेरि त्यो दिन पनि हाम्रो घर फिर्ती भयो ।
भोलिपल्ट पुस २० गते आफ्नो सम्पूर्ण रिपोर्ट लिएर पुनः हस्पिटलतर्फ लागियो । सिटिस्क्यान रिपोर्टसहित हामी कोठा नं. ४ मा पुग्यौं, त्यसबेला दिउँसो १ः३० बजेको थियो । हस्पिटलमा बिरामीहरु सबै आफ्नो जाँचपश्चात हिँडिसकेको अवस्था थियो । त्यहाँ तीन जना डाक्टरहरु रहेछन् ४ नं. कोठामा । उहाँहरुलाई मैले सम्पूर्ण रिपोर्ट देखाएँ, डा. हरु सबै ठीक राम्रो छ भन्दै थिए । म खुशी नै थिएँ । तर तीन जना डा. ले सिटिस्क्यानको रिपोर्टलाई ५ नं. कोठामा जान सल्लाह दिए । जहाँ कालीदास डा. साव हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई सबै फेरि बेलिबिस्तार लगाएँ । सबै रिपोर्ट ठीक छ, राम्रो छ । तर, तपाईंको सिटिस्क्यानमा फोक्सोमा सानो दाग देखिएको छ, तपाईं क्यान्सर हस्पिटल जानुहोस भने ।
मैले डा. सावलाई प्रश्न गरेँ, डा. साव यसको यहाँ उपचार हुँदैन ? डा. साव भन्दै थिए, यहाँ यसको ल्याब परीक्षण छैन, तपाईं क्यान्सर हस्पिटल नै जानुपर्छ भन्दै थिए । यो कुरा गर्दै रहँदा मैले डा. सावलाई भने डा. साव मलाई छातीको फोक्सोको दागभन्दा पनि छटपटी बढी हुने, राति निद्रा नलाग्ने, मन आत्तिने हो भन्दै गर्दा तपाईं ८ नं. कोठामा जानुहोस् त्यहाँ मनोरोगको डा. साव हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्नुहोस् भने । अब मैले हस् भन्नुको विकल्प नै थिएन ।
फेरि ८ नं. कोठामा पुगेँ, त्यहाँ पनि बिरामीको भीड त्यस्तै । पालो कुर्नुपर्ने अवस्था, आफूलाई धैर्य गर्दै पालो कुर्दै बस्न बाध्य । ४÷५ जनापछि मलाई डा. साबले बोलाउनु भयो, अनि मैले फेरि उहाँलाई पनि प्रारम्भदेखि हालसम्म भएको सबै बताएँ । डा. साब सोध्दै थिए, खोकी लाग्छ ? पहिले टिबी भएको हो ?, निमोनिया भएको हो ? आदि इत्यादि । तर, यी सबबाट म टाढा थिएँ । म भन्दै थिएँ, डा. साबलाई मलाई त्यस्तो केही छैन सर । मेरो प्रमुख समस्या भनेको छटपटी, मनमा कुराहरु खेल्ने, राति निद्रा नलाग्ने हो । मेरो हालत बुझेर उहाँले ५ दिनको लागि स्लिपिङ ट्याब्लेट दिनुभयो र ५ दिनपछि मलाई भेट्नु भने । यस्तैयस्तै पीडासँगै बित्यो त्यो दिनको ३ बजेसम्म । त्यसपछि हामी घर फिर्ती हुँदै थियो, एकपटक पसलतिर हुँदै जानुप¥यो भन्ने मलाई लाग्यो ।
पसल (मनकामना छापाखाना)मा आइपुगेपछि मिरा श्रेष्ठजी भेटिनुभयो उहाँ पिता परमेश्वरको भक्त हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई बिरामी भएको थाहा पाउनु भएको रहेछ, सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ के भएको हो ? प्रतिउत्तरमा मैले सबै कुराहरु बताएँ । उहाँले मलाई ग्रहण चङ्ग्याई गरी दिनुभयो । मैले सुनेको थिएँ प्रार्थना, भक्ति, साधना र विश्वासमा ठूलो शक्ति हुन्छ भन्ने सायद मलाई त्यस्तै किसिमको अनुभव भयो । उहाँले ग्रहण चङ्ग्याई गरेपछि एकछिनमै मेरो शरीर यसरी सिरिङ भयो कि लाग्छ मलाई सञ्चो भइसक्यो । शरीर एकछिन त हलुका, आफूलाई निकै आराम भएको महसुस भयो । आफूलाई मानौँ सञ्चो भइसकेको अवस्थाजस्तो अनुभव भयो । मिरा श्रेष्ठ जसलाई मैले भाउजू भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईंलाई ठीक भइसक्यो, चिन्ता केही नलिनु र भोलि शनिबार तपाईं प्रार्थना आउनु है, प्रार्थना जुट्दा धेरै राम्रो हुन्छ, मैले हस भाउजू भनेँ र हामी घरतर्फ प्रस्थान ग¥यौं ।
भोलिपल्ट २१ गते शनिबार म बिहानको ठीक १० बजे सतनचुली होटलमा पुग्यौं जहाँ परमेश्वर पिताको भजनकीर्तन हुँदोरहेछ । प्रार्थना, भजनकीर्तन, सत्य वचन, सु–समाचार, गवाही यस्तै यस्तैमा सहभागी पनि भइयो । त्यहाँ सहभागी हुँदै गर्दा छुट्टै खालको अनुभूति भयो । मनमा एक किसिमको आनन्द, त्यहाँ मानिसको दुःख, कष्ट, मानिसले भोगेका र पाएका प्राप्तिहरुको गवाही दिएका थिए । उपस्थित भक्तजनहरु सामान्य टाउको दुख्नेदेखि लिएर विभिन्न ठूलठूला रोगहरु पनि निको भएको गवाही दिएका थिए । चमत्कार चमत्कारको कुराहरु सुन्न पाइयो । हुन त परमेश्वरको प्रार्थना गर्ने, आस्था, भक्ति तथा विश्वास गर्ने हो जे पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरले यो मेरो विश्वास पनि हो । त्यसैले भनिन्छ परमेश्वरको प्रार्थना, आस्था, भक्ति र विश्वासमा ठूलो शक्ति हुन्छ । यो कुरा सत्य पनि हो । यसरी छटपटिएको मन, अत्तालिँदै गरेको अवस्था त्यहाँ सहभागी हुँदै गर्दा आफूलाई धेरै नै राम्रो भएको अनुभूति पनि गरेँ मैले । यसरी त्यो दिन पनि बित्यो ।
यता फेरि क्यान्सर हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था पनि थियो । मैले राधेश्याम खतिवडाजी, नारायण अधिकारीजी र महेन्द्र दाइसँग सहजीकरण गर्न मन लाग्यो । उहाँहरुलाई सबै बेलिबिस्तार लगाएपछि डा. विनय ठाकुरसँग भेट्न सल्लाह दिनुभयो । उहाँहरुको सल्लाहबमोजिम डा. विनय ठाकुरलाई भेट्न सल्लाह दिनुभयो । महेन्द्र श्रेष्ठ दाइले ठाउँका ठाउँ जया श्रेष्ठलाई फोन गर्नुभयो र मलाई उहाँलाई भेट्न जान भन्नुभयो । त्यो दिन शुक्रबार थियो दिउँसो करिब १ बजिसकेको थियो । महेन्द्र दाइकै सल्लाहअनुसार म तुरुन्त डा. जया श्रेष्ठलाई भेटेँ र उहाँलाई सबै कुरा बताएँ । उहाँले सबै रिपोर्ट हेर्नुभयो र फोक्सोमा कालो दाग डल्लोजस्तो देखिन्छ, टिकट काट्नुस् र प्रक्रियामा अघि बढौंला भन्नुभयो । दिउँसो ३ बजिसकेको थियो, समय बितिसकेकोले त्यो दिन सम्भव भएन । भोलिपल्ट शनिबार परेकोले हामी हाम्रो सल्लाहअनुसार आइतबार आउने कुरा भयो र हामी त्यो दिन पनि घर फर्कियौं ।
यसरी त्रासैत्रासमा समय बित्दै गइरहेको थियो । उता मनो विभागका डा. महमुदले पाँच दिनपछि भेट्न भनेको समय पनि भएको थियो । पुस २५ गते पाँच दिन भेट्न हामी गएका थियौं । तर डा. महमुद बिदामा रहेछन् । उहाँको ठाउँमा डा. सुनिलकुमार साह हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग मैले आफ्नो कुरा केही गर्न नपाउँदै, तपाईलाईं कस्तो छ ? राति निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन ? पहिला टिबी भएको हो ? निमोनिया भएको हो ? यस्तै कुराहरु डा. सुनिलले गर्दै थिए । तपाईंको रिपोर्ट ल्याउनुस् भने मैले सबै रिपोर्ट देखाएँ । मैले उहाँलाई मेरो कुरा बोल्न नपाउँदै औषधि लेखिदिए । मलाई केही बोल्नै दिएनन् । डा. सुनिल भन्दै थिए, बिरामी को ? बबिलाल तामाङ भन्ने मान्छे बिरामी, उपचार उसैलाई चाहिएको छ, हैन ? यस्तैयस्तै ।
हात सीधा गर्नुस् । ल तपाईंलाई ठीक हुन्छ, यो दबाई लिनुस्, मुख बार्नुस्, ठीक भई हाल्छ भने । यस्तो पनि उपचार पाइयो डा. साब यस्ता पनि हुँदा रहेछन् । अब के गर्ने तैं चुप मै चुप भने झैँ त्यो दिन पनि यस्तै यस्तै अस्पताल चक्कर काट्दै दिन बित्यो ।
पुस २६ गते फेरि म नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको अफिस पुगेँ र त्यहाँ अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडा र उपाध्यक्ष नारायण अधिकारीजीसँग क्यान्सर जान पर्ने भयो कसरी जाँदा ठीक हुन्छ भनेर सल्लाह लिन पुगेँ । जीवनमा कहिले यसरी आफूलाई परेर अस्पताल चक्कर काटेको थिइँन । त्यसैले साथीहरुको सहकार्यमा अघि बढ्ने इच्छा अनुसार उहाँहरुलाई भेट्न भनि गएको थिएँ । राधेश्यामजी र नारायणजीको सल्लाह अनुसार भोलि तपाई ठीक ९ बजे जानुहोस् कार्यकारी निर्देशक डा. विजय आचार्यलाई भेट्न सल्लाह दिनुभयो । सोही अनुसार भोलिपल्ट २७ गते हामी शुक्रबार बिहान ९ः१५ बजेतिर क्यान्सर अस्पताल पुग्यौं । का.नि. डा. सावलाई भेट्न पहिले उहाँको असिस्टेन्टलाई भेट्ने अनुमति लिनुपर्ने रहेछ । जहाँ कृष्ण सिलवालजी हुनुहुन्छ । उहाँलाई सबै कुरा बताएँ । डा. आचार्य मिटिङमा रहेछन् । कृष्णजीलाई पनि सबै कुरा बताएँ । उहाँले पनि सिटिस्क्यानको रिपोर्ट हेर्नुभयो र सामान्यजस्तो देखिन्छ । सायद औषधि लेख्नुहुन्छ होला भन्नु हुँदै थियो ठीक त्यही समयमा का.नि. डा. आचार्य साब आउनुभयो र मैले आफ्नो परिचय दिएँ । डा. सावले कृष्णजी तुरुन्त डा. विनयलाई फोन गर्नु उहाँको लागि भन्नुभयो र समस्या केही मलाई भेट्नु भन्दै उहाँ आफ्नो कार्यकक्षमा छिर्नुभयो ।
डा. विनय ठाकुर कोठा नं. १५ छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो र सोहीअनुसार म त्यतै लागेँ । बिरामीहरुको चाप ठीकठीकै थियो । मैले आफ्नो कार्ड त्यहाँको गार्डलाई दिएँ । एकछिन प्रतीक्षा गर्नु भन्नुभयो । म बाहिर बिरामीहरुको भीडमा डा. साबलाई भेट्ने प्रतीक्षारतमा थिएँ । ५,६ जना पछि मेरो पालो आयो, भित्र आउनको लागि भन्यो । डा. विनय ठाकुर साबले मेरो रिपोर्टहरु माग्नुभयो, टिबी भएको हो पहिला ? निमोनिया ? खोकी लाग्छ ? ज्वरो आउँछ ? आदि इत्यादि प्रश्न गर्नुभयो । मैले प्रतिउत्तरमा केही छैन डा. साव त्यस्तो । सानोमा बाले निमोनिया भएकोजस्तो लाग्छ यकिन छैन भनेको बताएँ । सिटिस्क्यान गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो डा. साब, मैले सिटिस्क्यान पनि गरिसकेको छु भने । सिटिस्क्यान रिपोर्ट हेरेपछि डा. साब भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईंको यो रोग नयाँ होइन, पुरानो हो । कुनै बेला फोक्सोमा पानी जमेर सुकेको दाग हो । चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन । म औषधि लेखिदिन्छु, यो औषधि एकहप्ताको लागि हो र ३ महिनापछि फलो अप गर्नु भन्नुभयो । मैले हस् डा. साब भन्दै उहाँको कार्य कक्षबाट बाहिरिएँ ।
यसरी सबै चेकअप भएपछि र फोक्सोको पनि चेक भएपछि सबै रिपोर्ट राम्रो आएपछि ढुक्क भइयो । असामान्य जीवन बिस्तारै सामान्यतर्फ आउँदै गयो । यस बीचमा मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरो परिवार, मलाई हस्पिटलसम्म लैजान सहजीकरण गर्नुहुने मेरो ज्वाइँ साहब पूर्णबहादुर तामाङ, भाइ उमेश श्रेष्ठ, छिमेकी पार्वती गुरुङ तथा मेरा शुभचिन्तक मलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव सबैसबै प्रति म ह्दयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
साथै पिता परमेश्वरलाई लाखलाख धन्यवाद । परमेश्वरको कृपा अपरम्पार छ । जसले हामी सबै मनुष्यलाई दुःख परेको बेलामा हेरिरहनु भएको छ । (लेखक : चितवन पोष्टकर्मी हुन्।)